Sudoku 🥇 Tinye ma nụ ụtọ ya site na emulator.online
Sudoku bụ egwuregwu dị ka ọtụtụ egwuregwu. Na-akpali echiche-nke mgbakọ na mwepụ na-eche echiche. Na mbu o nwere ike iyi ihe siri ike, mana ị ga-ahụ na obere omume, ịmara usoro dabara adaba, kwa ụbọchị ọ ga-adị mfe ma nwekwa ọ entertainụ.
Sudoku: Etu esi egwu nzọụkwụ site nzọụkwụ 🙂
Ga-ahụ a nnukwu square nke kewara n'ime obere obere oghere, na obere obosara ndi a ka agbakoro n'etiti etiti. Mpempe akwụkwọ ọ bụla nwere obere oghere 9 n'ime.
Ebumnuche nke egwuregwu ahụ bụ jupụta na oghere ndị na-enweghị isi na ọnụ ọgụgụ, nke mere na:
Ahịrị niile (kehoraizin) nwere nọmba niile site na 1 ruo 9, na-ekwughachi ihe ọ bụla.
All ogidi (vetikal) nwere nọmba niile site na 1 ruo 9, na-ekwughachi ihe ọ bụla.
Ihe niile etiti n'agbata ha nwere ọnụọgụ niile site na 1 ruo 9, na-ekwughachi ihe ọ bụla.
Gịnị bụ Sudoku?
N’asụsụ Japanese dị mma, aha anyị niile maara bụ ihe ọzọ karịa ime ka okwu ahịrịokwu dị mfe.suji wa dokushin ni kagiru", Kedu ihe ọ pụtara "nọmba ga-abụrịrị iche"Ọ na-ezo aka n'ihe omume ọgụgụ dị mfe nke nwere ntuziaka dị mfe nke ebumnuche ya bụ ịjupụta igbe efu niile site na usoro ọnụọgụ ọnụ ọgụgụ. Nke ahụ chọrọ mgbagha na ịtụgharị uche maka mkpebi ahụ.
Akụkọ Sudoku 🤓
N'agbanyeghị aha ya, Anaghị sudoku na Japan, mepụtara ihe a bụ nke onye Switzerland mgbakọ na mwepu Leonhard Euler. Ke XVIII narị afọ, kere ihe ọ kpọrọ "latin square", egwuregwu nke ọnụ ọgụgụ ga-apụta otu ugboro n'ahịrị ọ bụla na kọlụm nke ọ bụla. 9 ahịrị na 9 ogidi ghọrọ onye a ma ama mgbe malitere ibipụta na US. N’afọ ndị 1970.
Ọ bụ n'ebe ahụ 1984, mgbe ndị Japan Maki Kaji zutere egwuregwu ahụ. Mgbe ọ laghachiri n'ala nna ya, Kaji mma egwuregwu (O nyere akara ngosi, nke pụtararịrị na igbe ahụ, wee mepụta ọkwa dị iche iche nke ihe isi ike, mee ya baptizim wee gbanwee ya ọkụ n'etiti ndị obodo ya: taa Japan nwere ihe karịrị 600,000 magazin pụrụ iche na Sudoku.
N'ebe ọdịda anyanwụ, ịgba chaa chaa malitere ịba ara na 2005. Nzọụkwụ mbụ ewere na 1997, mgbe New Zealander Wayne Gould gara Japan, mụtara banyere Sudoku ma mepụta mmemme kọmputa maka egwuregwu ahụ, nke ewepụtara na 2004. 8 ọnwa gara aga, ihe okike nke egwuregwu ahụ malitere ibipụta ya kwa ụbọchị site na akwụkwọ akụkọ Times, nke na-esote asọmpi na gburugburu ụwa.
Suddị sudoku na mgbakwunye na nke otu:
Diagonal: Iji kpọọ, ị ga-agbaso otu iwu ahụ dị ka Sudoku ọdịnala, ya bụ, mezue ebe niile site na iji nọmba si 1 ruo 9, na-enweghị ikwughachi na ahịrị na ntanetị. Akụkụ kachasị pụta ìhè nke egwuregwu sudoku a bụ na, na mgbakwunye na ijikọ eriri kwụ ọtọ na nke kwụ ọtọ, ị ga-emerịrị ọnụọgụ abụọ dị n'etiti na-akpụ X, yana ọnụọgụ site na 1 ruo 9 nakwa na ha anaghị emeghachi onwe ha.
Na-adịghị mma: o nwere otu iwu dị ka kpochapụwo, belụsọ na akụkụ anọghị oge ọ bụla.
Kakuro: Egwuru egwu kakuro esighi ike, obu ezie na ewere ya dika ihe kariri sudoku. Ebumnuche bụ itinye nọmba site na 1 ruo 9 n'ụzọ ọ ga-eme ka ha ghara ikwugharị n'usoro nke akara na n'usoro nke kọlụm ahụ, ebe ọ dị mkpa na nchikota nke nọmba (nịịle ma ọ bụ n'akụkụ) na nha anya metụtara .
Ogbu mmadu: obu nchikota Sudoku na Kakuro. Ya mere, enwere mpaghara ebe a na-enweghi ike imeghachi ya na nchikota ya gha egosi onu ogugu.
Megasudoku: ị ga - eme ka ọnụọgụ 1 ruo 12 pụta naanị otu ugboro n'ahịrị ọ bụla, kọlụm, na akụkụ anọ. Yiri nke ọdịnala mana nwere ọnụọgụ atọ ọzọ.
Minisudoku: Ọ dị iche na nke ọdịnala site na nke nwere obere ọnụ ọgụgụ.
Multisudoku: O mejuputara otutu sudoku puzzles nke jikotara onu.
Ndụmọdụ iji dozie Sudoku 🙂
Ihe mbụ ị ga - eme iji bido ihazi Sudoku bụ họrọ usoro iji duzie (ahiri, kọlụm ma ọ bụ akụkụ anọ). Ọ bụrụ na ị họrọghị otu ma nwaa ịme ihe niile n'otu oge, ị nwere ike ịkwụsị ịgbagha na ịmegharị ihe niile, nke ga-ewe gị ogologo oge na egwuregwu ahụ.
Kwuo, dịka ọmụmaatụ, ịhọrọ ịhọrọ ahịrị n'ahịrị. Mgbe ahụ ị ga-enyocha ahịrị izizi kwụ ọtọ wee hụ ọnụọgụ ndị dị na ya na ndị na-efu efu. Dejupụta oghere ndị na-adịghị na ọnụ ọgụgụ na-efu, ịa ntị na nọmba dị na kọlụm iji jide n'aka na ọ naghị emeghachi onwe ya.
Mgbe edozi akara nke mbụ, gaa na uzo nke abuo ma megharia usoro a. Hụ nọmba ị nwerela na ndị nke na-efu ịmalite ịmalite imeju. Ọ bụrụ na ịnweghị nọmba 1 na ahịrị nke abụọ, gaa na akụkụ anọ efu mbụ wee dee 1. Mgbe ahụ lee anya na kọlụm maka square ahụ. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ 1 adịworị na kọlụm ahụ, wepụ ya ma dee 1 na square ọzọ. Cheta ka ịlele oge niile ma ọ bụrụ na ị naghị emeghachi nọmba ọ bụla dị na square.
Soro usoro a ruo na njedebe, ị nwere ike iwuli egwuregwu Sudoku gị. Na njedebe, ọ na-esiwanye ike ịchọta ebe dabara adaba na ọnụọgụ na-ekwughachighị ya, mana ihe ọ bụla na-anwa ịgbanwe ọnụọgụ ebe iji mee ka ọ dịkwuo mfe.
Sudoku: atụmatụ 🤓
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ na atụmatụ dị mfe iji nyere gị aka idozi puoku Sudoku.
Iji akara, ị nwere ike iji ndụmọdụ ndị a dị mfe (na ọbụna doro anya):
Nọmba na-alụbeghị di
N'oge ọ bụla, lelee egwuregwu anya maka mkpụrụ ndụ naanị otu nwere akara na akara ahụ. Nke a na-egosi na enwere ike naanị maka sel ahụ.
Zoro naanị nọmba
Ọtụtụ mgbe na-ele anya nke ọma, ị nwere ike ịchọta "zoro naanị nọmba". Nọmba a apụtaghị naanị na akara. Ọ bụ naanị nwa akwukwo nwere ike n'usoro, kọlụm ma ọ bụ grid 3x3, ọ na-egosi naanị n'etiti nọmba ndị ọzọ. Lee foto n'akụkụ:
Na onyonyo a, ị ga - ahụ na ọnụọgụ 1 na 8 pụtara naanị otu ugboro na ntanetị 3x3 ha. Nke a na-egosi na a ga-enyerịrị ha n'ọnọdụ ndị ahụ.
1. Ọ bụrụ n ’oge ọbụla ị chọtara otu ọnụ ọgụgụ ahụ naanị na akara otu otu (ahịrị, kọlụm ma ọ bụ okporo), ọ pụtara na a ụzọ ga-abụrụ-egosi na abụọ ndị a niime ụlọnga. Lee onyinyo dị n'okpuru:
2. Na onyonyo a anyị na-ahụ na nọmba 1 na 3 pụtara naanị na sel abụọ, yabụ a ga-eji ha na sel ndị ahụ. Anyị amaghị ihe nọmba na-aga na cell ọ bụla. Kaosinadị, anyị maara na ọnụọgụ 1 na 3 enweghị ike ịpụta na sel ndị ọzọ na-enweghị isi. Ya mere, anyị nwere naanị otu ohere na nke ọ bụla.
Maka ndị na-achọghị iji ụdị, anyị ga-akọwa atụmatụ dị mfe ma bara oke uru.
Usoro ụzọ gafere nwere ike ihe mbụ ndị mmadụ na-amụta mgbe ha na-egwu Sudoku. Ndị na-egwu egwu na-amụta site na ịme, n'ihi na ọ dị mfe ma bụrụ isi.
N'ime ya, onye ọkpụkpọ ahụ ga-ahọrọ ọnụọgụ (nke na-abụkarị nke kachasị dị na egwuregwu ahụ) wee see akara ngosi n'echiche na ahịrị na ogidi nke ọnụ ọgụgụ ahụ dị.
N'ihe atụ na-esonụ, anyị na-ahọrọ nọmba 9. Anyị na-achọta ebe niile ọ dị ma anyị na-adọta akara ngosi n'echiche na ahịrị na ogidi iji gosi na ọnụọgụ 9 enweghị ike itinye n'ọnọdụ ndị ahụ. Ozugbo emere nke a, anyị na-akara ọnọdụ ndị akwụghị ụgwọ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Cheta na : Ọ dị mkpa iburu n'uche na ụfọdụ mkpụrụ ndụ efu, ọ bụ ezie na ewepụghị ha site n'echiche, enweghị akara dị ka n'efu n'ihi na ha nwere nọmba 9 na otu 3x3 grid.
Site na nyochaa ọnọdụ ndị nweere onwe ha, anyị nwere ike ịhụ na na etiti 3x3 grid enwere naanị otu ohere efu maka nọmba 9, yabụ anyị nwere ike idowe ya n'ọnọdụ ahụ.
Ozugbo emere nke a, anyị na-emegharị usoro nke akara ngosi maka ọnụọgụ nke anyị ka debere. Lelee nsonaazụ ahụ:
Ọzọ anyị ga-enyocha ọnọdụ ndị nweere onwe ha n'ịchọ ọhụụ ọhụrụ. Dịka anyị pụrụ ịhụ, na grid dị n’etiti ala nwere naanị otu ọnọdụ nwere onwe. Mgbe ahụ, anyị nwere ike itinye nọmba 9 ma megharịa usoro a dị n'elu.
Oge a otu ọnọdụ enweghị ohere pụtara n'akụkụ aka ekpe ala, yabụ anyị tinyere 9 n'ọnọdụ ahụ wee gaa n'ihu na atụmatụ ahụ.
Ugbu a, anyị nwere ike ịhụ na anyị nwere ọnọdụ anọ n'efu maka nọmba 9, ọ nweghị nke dị iche na grid 3x3 ọ dị. Ya mere, anyị amaghị ebe anyị ga-etinye 9 n'iji usoro a naanị.
Otu ụzọ o kwere omume bụ họrọ nọmba ọhụrụ ma megharịa usoro a anyị kọwara ugbu a. Probably ga-enwe ike jupụta ọtụtụ sel na-eji naanị atụmatụ a.
Ugbu a na ị nwere ụfọdụ atụmatụ, nwee anụrị ma jiri ụbụrụ gị rụọ egwu site na ịkpọ Sudoku.🙂
Nzube nke egwuregwu ahụ
Sudoku bụ egwuregwu na-achọ oge na echiche, mana ozugbo ị matara iwu, ọ na-adị mfe ịme egwuregwu.
Sudoku n'ozuzu nwere tebụl 9x9, nke emere Ntọala 9, ndị nwere Mkpụrụ ndụ 9 n'otu n'otu.
Isi echiche nke egwuregwu ahụ bụ na ọkpụkpọ ị kwesịrị ị na jupụta table na nọmba site 1 ka 9, na-enweghị ihe ọ bụla ugboro ugboro nke nọmba na otu akara ma ọ bụ okporo.
Ọ bụrụ na ịgbaso iwu ndị a niile ma jikwaa jupụta tebụl, mgbe ahụ egwuregwu ahụ meriri!
Tebụl Sudoku Ezubere ka ha nwee otu azịza Dị ka nke a, ọ bụ ihe nkịtị na anyị enwetaghị ya nke ọma na nke mbụ ya.
Maka otu ihe a, ọtụtụ ndị egwuregwu na-ahọrọ ide nọmba na pensụl ka ehicha ha ma ọ bụrụ na ha mehiere.
Aro ọzọ a ga-atụle bụ ojiji nke ụghalaahịa. Site na ụdị, anyị na-eche na dee ihe dị iche iche dị n'ime cell ọ bụla. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na mkpụrụ ndụ nwere ike ịnwe nọmba nke 3 na 9, ihe kachasị mma bụ igosi (na obere nha) ma nọmba ma dozie tebụl ndị ọzọ, ruo mgbe ọnụ ọgụgụ kwekọrọ na cell ahụ ruru.
Na ụfọdụ nsụgharị nke Sudoku, obere akara ndị a abanyelarị na tebụl, iji kwado mkpebi ha. N'ime nsụgharị ndị a nke gụnyerịrị akara, enwere ụfọdụ aghụghọ ga - enyere gị aka idozi ihe omimi ahụ:
Mgbe ọ bụla na tebụl Sudoku (na akara) ị chọta nọmba naanị n'otu cell, nke a bụ na-egosi na enwere naanị otu ohere maka otu sel ahụ, nke ahụ bụ, ị ga-akpọ nọmba ahụ ozugbo na cell.
Sudoku nwere ike mgbe ụfọdụ bụrụ egwuregwu dị mgbagwoju anya, mana enwere obere aghụghọ iji nyere anyị aka ịmata egwuregwu ahụ. Iji maa atụ, n'egwuregwu ebe e nwere akara, mgbe ụfọdụ anyị na-ahụ ihe a na-akpọ "zoro naanị nọmba".
Nọmba a apụtaghị naanị na sel (tinyere nọmba ndị ọzọ), mana ọ bụ naanị onye ga - ekwe omume n'ahịrị, kọlụm ma ọ bụ grid 3x3.
Nke ahụ bụ, mgbe n'ime grid 3x3, dịka ọmụmaatụ, nọmba 3 pụtara ma ọ pụtaghị na sel ọ bụla na grid ahụ, mgbe ahụ ọ bụ ihe ngosi na nọmba 3 bụ nke sel ahụ.
Ọ bụrụhaala na ịchọta ọnụ ọgụgụ otu ụzọ ahụ na akara nke grid 3x3, mgbe ahụ ọ pụtara na ụzọ a bụchaghị ga-adị na mkpụrụ ndụ abụọ a, naanị ajụjụ na-ebilite ebe a bụ nke ga-abụ na nke ọ bụla.
Enweghị aha mmado
Ọ bụrụ na ụdị gị nke Sudoku abịaghị akara ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọghị iji akara, enwere usoro ọzọ dị mfe iji nyere gị aka ịma egwuregwu a.
A na-eji usoro eji eme ihe gafere, n'ihi nnukwu ịdị mfe nke iji ya. Gosiri na họrọ ọnụọgụ nke na-egosi ọtụtụ ugboro na tebụl niile wee see (na pensụl ka ọ ghara inwe mgbagwoju anya) ahịrị ndị dị n'ahịrị na otu nke otu ọnụ ọgụgụ ahụ jikọtara.
Mgbe anyị dọpụsịrị akara niile, anyị na-aga n'ihu na akara akara mkpụrụ ndụ ndị na-ekpuchighị n'ahịrị ndị ahụ. Mgbe ahụ, a na-enyocha nke grid 3x3 enweghị nọmba 9 na nke nwere oghere (agaghị agafe) itinye ya.
Ozugbo emere nke a, họrọ nọmba ọzọ ma megharịa usoro ahụ, ruo mgbe a ga-ejupụta mkpụrụ ndụ niile. Na njedebe, ịkwesịrị ịlele ma enwere ọnụọgụ nọmba na otu akara ma ọ bụ grid. Ọ bụrụ na enweghị ọnụ ọgụgụ ugboro, mgbe ahụ egwuregwu ahụ meriri.
Oge na ihe isi ike
Enweghị oge kachasị maka ihe mgbagwoju anya Sudoku ọ bụla, na onye ọ bụla nwere ike ịnụ ụtọ egwuregwu ahụ ọ bụrụhaala na ha chọrọ.
Egwuregwu Sudoku nwere ike ịdị iche n'etiti nkeji 5 na 45, ma ọ dabere na ahụmịhe nke onye ọkpụkpọ ahụ na ọkwa nke nsogbu nke egwuregwu ahụ. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ka egwuregwu ahụ na-esikwu ike, ka a na-achọkwu echiche, ya mere egwuregwu ahụ ga-ewe ogologo oge.
Banyere ihe isi ike, ọ na-apụtakarị na aha weebụsaịtị ma ọ bụ magazin. Enwere egwuregwu dị mfe maka ndị mbido ma sie ike maka ndị egwuregwu nwere ahụmịhe karịa. Maka ndị ọkachamara, ọkwa siri ike karị nwere ike bụrụ ihe ịma aka n'ezie, ebe ọkwa ahụ ga-amalite ịdị oke mma, nke ọnụ ọgụgụ dị ka ọ na-egosipụta. Ya mere, na mgbakwunye na echiche bụ isi, ị chọkwara otu atụmatụ.
Ya mere, edemede ahụ kwubiri. Ndeewonu! Ugbu a ịmara ka esi egwu Sudoku, ma ọ bụ opekata mpe ị nwere ihe ọmụma zuru oke iji dozie egwuregwu mgbagwoju anya ndị a!